घर अफ्रिकी फुटबल स्टोरीहरू नाइजेरियन फुटबल खेलाडीहरू जोश माजा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्यहरू
हाम्रो जोश माजा बायोग्राफीले तपाईंलाई उसको बाल्यावस्थाको कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू बताउँदछ।
संक्षेपमा, हामी लन्डनको जन्म नाइजेरियन पेशेवर फुटबलरको इतिहास चित्रण गर्दछौं। हाम्रो कथा उसको शुरुको दिनदेखि सुरु हुन्छ जब उनले फुलहमसँग सफलता प्राप्त गर्‍यो। जोश माजाको बायोको आकर्षक प्रकृतिमा तपाईंको अटो-बायोग्राफी एपिटिटलाई छेड्न, उसको क्यारियर प्रस्थान हेर्नुहोस्।
हो, सबैलाई थाहा छ उनकी परी कथा प्रिमियर लिगमा जीवन सुरु हुन्छ - जहाँ उनले एभर्टनको बिरूद्ध २-०को जीतमा पहिलो दुई गोल बनाए। यो प्रशंसकको बावजुद, केवल थोरै फ्यानहरूलाई जोश माजाको जीवन कहानीको बारेमा थाहा छ। थप विज्ञापनको साथ, सुरु गरौं।
जोश माजा बाल्यकाल कहानी:
जीवनी सुरुवातीहरूको लागि, उहाँ जोश जादू उपनाम राख्नुहुन्छ। नाम - जोश मात्र एक उपनाम हो र उसका वास्तविक नामहरू हुन् - जोशुआ इरोली ओरीसुन्मिहारे ओलुवासेन मजा। पेशेवर फुटबलर डिसेम्बर १ 27 1998 of को २th औं दिनमा नाइजेरियाका बुबा र आमा जन्मेका थिए, ल्विशमको लन्डन बरोमा।
जोश माजाले आफ्नो बाल्यकालका वर्षहरू पिम्लिको, वेस्टमिन्स्टरको एक आवासीय क्षेत्र बिते। उहाँ आफ्ना तीन जना भाइहरू, आफ्ना आमा बुबा (विशेष गरी उनकी आमा) र बहिनीसँग हुर्कनुभयो। उनका भाइबहिनीहरू मध्ये उल्लेखनीय ईमानुएल र यर्मिया माजा हुन् - जो दुबै यहाँ चित्रण छन्।
जोश माजाका भाइहरू - इमानुएल माजा (दायाँ) र यर्मिया माजा (बाँया) भेट्नुहोस्।
शुरुआती दिनमा यी केटाहरूले फुटबल खेल्ने तरीकालाई विचार गर्दा त्यहाँ केही पनि थिएन जुन उनीहरूले गरे पनि फुटबलको ताराहरू नबढ्ने भन्ने सुझाव दिएका थिए।
जोश माजा परिवार पृष्ठभूमि:
नाइजेरियाको अगाडि ल Long्गोनमा नाइजेरियन आमा र बुबाको रूपमा जन्मेको थियो जसले मध्यमवर्गीय अंग्रेजी नागरिकको रूपमा आराम गरी बस्दछन्। जोस एउटा गरीब पृष्ठभूमिमा हुर्केन। उनका अभिभावक धेरैजसो मानिस जस्ता थिए जसले काम गरे, पैसाको साथ कहिले पनि सled्घर्ष गरेनन् र राम्रो वित्तीय शिक्षा पाए।
जोश माजा पारिवारिक उत्पत्ति:
उहाँ जन्मनुभयो र इ England्ल्याण्डमा हुर्केका तथ्यहरूको बाबजुद, लण्डनका वासिन्दाले उनका नाइजेरियाली जरालाई सराहना गर्छन्। उनको ख्याति बढेको साथ धेरै प्रशंसकहरूले सोधेका छन्… नाइजेरियामा जोश माजाका आमा बुबा कहाँबाट आउँछन्?…
सर्वप्रथम पहिलो, उनीसँग दुईवटा योरूबा नामहरू छन् - (ओरिसुनमिहारे र ओलुवासेन)। गहन अनुसन्धान पछि, हामीले उनको एउटा नाम (ओरिसुन्मी) ओन्डो स्टेट, नाइजेरियामा पत्ता लगाउन सक्षम भयौं। सम्भवतः यो यो हो जहाँ जोश माजाको बुवा आउँदछन्।
नाम (Orisunmi) Ondo राज्य मूल हो। यो जोश माजाका एक जना आमा बुबा (उसको बुवा) ओन्डो राज्य, नाइजेरियाका हुन्।
फेरी - उनको उत्पत्तिको अन्तराल - हामीले उसको अर्को नाम ईरोओली लिइसकेका थियौं। यो नाम वारी, डेल्टा राज्यबाट आएका मानिसहरूलाई सामान्य छ। यस कारणका लागि, हामी अत्यधिक अनुमान लगाउन सक्छौं कि जोश माजाको आमा डेल्टा राज्य, नाइजेरियाबाट आएका हुन्। सन् १ 1990 his ० को दशकमा उहाँका दुबै आमाबुबा नाइजेरिया छोडेर इ England्गल्याण्ड छाडेका थिए जसले राम्रो परिवार बनाएका थिए।
स्वतन्त्रलाई अप्रोड गर्दै, जोश माजाको आफ्नो क्यारियर को उदय हुनु अघि शिक्षाविदहरु मा एक संलग्नता थियो। बेलायती अखबारमा उनले रिपोर्ट गरे कि उनले किशोरावस्थामा समेत स्कूली शिक्षा निरन्तरता दिए।
नाइजेरियाको परिवारबाट आएका जो आफ्ना बच्चाहरूको लागि शिक्षामा उच्च मूल्य राख्ने प्रख्यात छन्, यो स्पष्ट छ कि व्यावसायिक क्यारियरले योजना अनुसार काम नगरेको खण्डमा यस्तो अर्को कुरा हुन सम्भव हुने थियो।
जोश माजा फुटबल कहानी:
उसको विकिपेडियाले भनेका छ, जवान आमाबाबु, उनको जन्म पछि, लेविशम ग्रेटर लन्डनमा अवस्थित पिंप्लिकोमा बसोबास गर्न छोडे। तसर्थ, यो वेस्टमिन्स्टरको शहरको मध्य लन्डनमा थियो कि जोश र उनका भाइहरू - यर्मिया, इमानुअल (एट अल) ले उनीहरूको फुटबल सीप सि horn्ग गरे।
आफ्नो सपना साकार पार्न दृढ संकल्पको साथ जोसले क्रिस्टल प्यालेस र फुलहमको साथ सफल परीक्षणहरू गरे। यी लन्डन एकेडेमीहरूमा, उभरते ताराले आफ्नो युवा जीवनको राम्रो आधार बसाल्यो।
लन्डनको पछाडि युवाको अनुभव विस्तार गर्ने पूर्ण आवश्यकताले शहरको साथ ट्रायलको लागि उत्तर पश्चिमी इ England्ल्यान्ड (म्यानचेस्टर) को यात्रा गर्ने हिंस्रक कोठा देखे। आफ्नो परिवारको आनन्दको लागि, जोश बित्नुभयो र उनी जस्तो मन पराउनुभयो Jadon Sancho त्यहाँ पनि खेलेको।
जोश म्यानचेस्टर शहर एकेडेमीका लागि खेल्थे जुन ठूलो आशा थियो कि क्लबले उनलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछ। दुर्भाग्यवस, तिनीहरूले गरेनन् र आफ्ना अभिभावकसँग परामर्श गरेपछि उदाउँदो ताराले इ England्ल्यान्डको सर्वश्रेष्ठ एकेडेमी सुन्दरल्याण्ड छोडे। त्यहाँ उसले आफूले चाहेको कुरा पायो - दुई वर्ष छात्रवृत्ति।
जोश माझा जीवनी - प्रख्यात कथाको लागि मार्ग:
सेप्टेम्बर २०१ 2016 एक वर्ष भयो जुन उनले कालो बिरालाहरूसँग वरिष्ठ फुटबलको स्वाद पाए। अपेक्षित रूपमा, उनी आक्रमणकारी व्यक्तित्वको ठूलो ईन्जेन्शन दिईरहेको छ। जोस एक विनम्र स्ट्राइकर थिए जसले सीनियर प्लेयरबाट सिकेका थिए - जस्तै Jamine Defoe - जसलाई उनले एक रोल मोडेल ठाने। हेर, केटाले आफ्नो आइडलबाट हडताल पाठहरू पाउँदैछ।
जामिन डेफोले सुन्दरल्याण्ड छोड्दा जोस माजा आफ्नो ओहदा लिन रुचाए। चिपकने नियन्त्रण र विगतका प्रतिद्वन्द्वीहरूको बहिष्कारको साथ आशीर्वाद, सुपर बच्चाले फ्रान्सको लागि मूल्य निर्धारण गर्नु अघि १ goals गोल गरे। तल उसको सुन्दरल्याण्डको साथ आफ्ना भव्य दिनहरूको भिडियो छ जहाँ उनले केही स्वागेर र अहंकारसँग खेले।
जोश माझा जीवनी - सफलता कहानी:
जनवरी २०१ 26 को २th औं दिनमा, सुन्दरल्याण्डले फ्रान्सेली लिग १ क्लब बोर्डोको लागि साढे चार वर्षको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो आश्चर्यजनक तलब वृद्धि - एक हप्ता € 65,000 सँगै खेल्दै Yacine Adli, जोस लेस Girondins संग एक द्रुत हिट भयो।
फुटबलि st स्टारडममा उकालो लाग्दै, जादू जोशुआ (आफ्नो बोर्डो गोलको भिडियोमा देखिएजस्तो) फ्रान्सेली फुटबलको सबैभन्दा लोकप्रिय युवा सम्पत्तिमध्ये एक बन्न पुग्यो। कोरोनाभाइरस महामारीको कारण २०१२-२०२० सिजन यो समापनको लागि उनले क्लबको शीर्ष स्कोरर पुरस्कार जित्यो।
उसको बुबाआमा नाइजेरियन हो भन्ने तथ्यले गर्दा, देशको फुटबल कोच, Gernot रोहर, चाँडै माजा तस्करी। उद्देश्य को लागी प्रतिस्पर्धा बढाउनु थियो भिक्टर ओसिम्हेन, एक देश को मनपर्ने स्ट्राइकफोर्स को रूप मा।
२०२१ को सुरुमा, उदाउँदो ताराले इ family्ल्यान्डमा फर्किने ठाउँमा आफ्नो परिवारसँग परामर्श लिए। यस पटक, उनले आफ्नो भाग्यले उनलाई प्रिमियर लिगमा सफल हुने कुरा बताए। १ फेब्रुअरी २०२१ मा, ट्रान्सफर डेडलाइन डे, जोस आफ्नो पूर्व क्लब, फुलहमको साथ इ England्ल्यान्ड फर्कियो।
भ्यालेन्टाइन दिवस - फेब्रुअरी 14 को आफ्नो भाग्य प्लेआउट को लागी प्राथमिक दिन थियो। त्यो दिन, उसले एभर्टनको बिरुद्ध जीत हासिल गर्न आफ्नो पहिलो डेब्यूमा दुई गोल (भिडियो तल छ) अoring्क गर्दै परी कथा सुरु गर्‍यो।
कुनै श doubt्का बिना, विश्व अझ राम्रो फुल्हाम संस्करण हेर्नको कगारमा हुन सक्छ Alekandar Mitrovic, एक जना युवा, एक पटक इ England्ल्याण्डले अस्वीकार गरेको थियो र अब हाम्रो आँखाको अगाडि, विश्व स्तरीय प्रतिभा बन्नको लागि आफ्नो मार्ग फूलेको छ। बाँकी, हामी भन्छौ, इतिहास हुनेछ।
जोश माजाको प्रेमिका को हो:
के तपाइँ यहाँ प्रेममा नाइजेरियाली स्ट्राइकरको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न हुनुहुन्छ? जोश माजाको प्रेमिका को हो भनेर पत्ता लगाउन के तपाईंसँग तीव्र इच्छा छ?… Lifebogger हो। सबै ईमानदारी मा, हामी सबै को लागी खोज, अझै WAG को कुनै संकेत छैन।
जोस माजाको प्रेमिकालाई चिन्ने।
तल, हामी विश्वास गर्छौं जोश माजा निजी कसैलाई डेट गर्दै छन्। तसर्थ, उहाँको निजी जीवन सार्वजनिक हुनु भन्दा पहिले यो कुरा मात्र हो। तर यसको विचारमा आउनुहोस्, ... यदि ऊ जस्तो कोही लक्ष्यको सामु छिटो छ भने, ऊसँग निजी मामला व्यवस्थापन गर्ने सवालहरू हुँदैनन्।
माजा मकर हो, समय र जिम्मेवारीको प्रतिनिधित्व गर्ने स sign्केत। नाइजेरियन फारवर्ड एक व्यक्ति हो जसले स्वतन्त्रताको आन्तरिक राज्य पाउँदछ जुन उसको व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवनमा महत्वपूर्ण प्रगति गर्दछ।
जोश माजा जीवनशैली:
उनले कसरी £०,००० डलर फुल्हम साप्ताहिक ज्याला खर्च गर्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तरमा, नाइजेरियाली स्ट्राइकरले भव्य जीवन नबिताएको स्वीकार गरे। माजा चमकदार म्यागजिनहरूको अवलोकन गर्दछ र त्यहाँ त्यस्तो कुनै चीजहरू छैनन् जस्तो विदेशी कारहरू, ठूला घरहरू (हवेलीहरू) केटीहरू, बज आदि प्रदर्शन गर्दछ।
जोश माजा पारिवारिक जीवन:
भिजन भनेको धेरैलाई अदृश्य मानिने कुराको कार्य हो। माजा खेलका लागि घरबाट आएका छन्। यस खण्डमा, हामी तपाईंलाई उनको मोनेजको बारेमा थोरै बताउँछौं।
जोश माजाका अभिभावकहरूको बारेमा:
उनीहरूले चार छोरा र एक छोरी हुर्काए। उसलाई र उनका भाइहरूलाई फुटबलर बनाउनु जोसको आमा र बुबाले गरेको एक उत्तम निर्णय हो। फुटबलरको एन्टी-फ्ल्यास एटिट्यूट उसको बुबाआमाले उसलाई आधार बनाएको परिणाम हो। यद्यपि सानो कागजात तिनीहरू अवस्थित छन्, यो समयको कुरा मात्र हो उनीहरू आफैंलाई सार्वजनिक गर्नु भन्दा पहिले।
जोश माजाका भाई बहिनीहरूको बारेमा:
फ्ल्याश कार र सोशल मिडिया जीवनशैली प्रदर्शनको आधुनिक फुटबल जगतमा, फुटबल भाइहरूले एक स्फूर्ति औषधि प्रतिनिधित्व गर्दछ।
इमानुएल माजा एक होल्डि mid मिडफिल्डर हो जसले एक पटक म्यान सिटीको साथ ट्रायलहरू गरेको थियो र एफसी क्रोइडनसँग खेल्दछ जस्तो म यो बायो लेख्छु। अर्कोतर्फ, उसको जेठो भाई, यर्मिया माजास एक छिटो अगाडि छ - गोलका लागि आँखा सहित - आफ्नो जोश जस्तै।
जोश माजा अनटल्ड तथ्यहरू:
नाइजेरियाका पेशेवर फुटबलरमा हाम्रो संस्मरणलाई जोड दिदै हामी तपाईंलाई यसका बारेमा अझ धेरै सत्य कुरा बताउन यस सेक्सनको प्रयोग गर्नेछौं। धेरै विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
तथ्य # 1 - जोश माजा फुलहम वेतन:
सुन्दरल्याण्डका मालिक स्टुअर्ट डोनाल्डले माजाले प्रति हप्ता earned १००० कमाएको खुलासा गरे। फ्रान्सेली वेबसाइट लक्वेपाका अनुसार उनले बोर्डेक्समा हप्ताको €€,००० डलर लिए। फुलहमको चालमा pay 1000 को तलब वृद्धि देखिएको छ।
पूर्ण SALARY BREAK तल
प्रति वर्ष: £ 3,124,800
प्रति महिना: £ 260,400
प्रति हप्ता £ 60,000
प्रति दिन: £ 8,571
प्रति घण्टा: £ 357
प्रति मिनेट: £ 6
प्रति सेकेन्ड: £ 0.09
तपाईंले जोश माजालाई हेर्न सुरु गर्नुभयोको बायो, यो उसले फुल्हामसँग कमाएको हो।
London 37,000,००० कमाउने एक लन्डनले फुलहमको साथ माजाको वार्षिक तलब बनाउन years years बर्ष काम गर्नुपर्नेछ।
तथ्य #2- जोश माजाको धर्म:
के तिमीलाई थाहा छ उसको वास्तविक नाम जोशुआ हो? यो बाइबलीय नाम हो जसको अर्थ हो - 'भगवान मेरो मुक्ति हुनुहुन्छ'। तसर्थ, यो तथ्यलाई इन्कार गर्न मिल्दैन कि जोश माजाका अभिभावकहरूले उनलाई एक इसाईको रूपमा हुर्काएनन्। वास्तवमा स्ट्राइकरको इन्स्टाग्राम बायोको अंशले यो सबै भन्छ। यो पढ्छ; परमेश्वर सबै भन्दा माथि हुनुहुन्छ.
तथ्य #3- जोश माजाको एजेन्ट को हो?
एलिट प्रोजेक्ट ग्रुप लिमिटेडले नाइजेरियाली स्ट्राइकरको प्रबन्ध गर्दछ। कम्पनीको ग्राहक मध्ये सब भन्दा ठूलो शीर्ष ब्लैक फुटबलर हो। ती मध्येका हुन् Alex Iwobi, जाडोन सcho्को, Bukayo Saka, एडी नाइकेयाहिया, फोलेरिन बालोगुन, रेस नेल्सन। एलिट प्रोजेक्ट ग्रुपले पनि व्यवस्थापन गर्छ टोड क्यान्टवेल.
तथ्य #4- जोश माजा नेट वर्थ:
एक संयोजन वित्तीय कारकहरू जस्तै उसको अनुभवको वर्षहरू, ती बर्षहरूमा कमाएको तलब र प्रायोजनले दायित्व घटाउने सम्पत्तिको मूल्यमा वृद्धि देखिएको छ। यस रसमा हामी अनुमान गर्दछौं कि माजाको नेटवर्थ करीव approximately २ मिलियन छ।
तथ्य #5- जोश माजा फिफा तथ्या :्क:
माथि उसको भिडियोको श्रृंखलामा उनका गोलहरू हेरेपछि, तपाईं मसंग सहमत हुनुहुनेछ कि उहाँ अधिक विन्दुहरूको योग्य हुनुहुन्छ। प्रिमियर लिगमा जीवनको उज्ज्वल सुरुसँगै, यो निश्चित छ कि फिफाले उनलाई पछिल्लो अद्यावधिकहरूमा सम्झने छन्।
यस संस्मरणलाई संक्षेपमा भन्नुपर्दा, हामीले यो तालिका सिर्जना गरेका छौं जुन जोश माजाको बारेमा बायोग्राफिक सोधपुछसँग सम्बन्धित सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छ।
पूर्ण नामहरू: जोशुआ एरोली ओरिसुनमिहारे ओलुवासेन मजा
उपनाम: जोस र जादू
जन्म मिति: २ December डिसेम्बर, १ 27 1998।
जन्मस्थान: लुविशाम, इ England्ल्यान्ड
परिवार जरा: नाइजेरिया
अभिभावक उत्पत्ति: दक्षिण पश्चिम नाइजेरिया
Siblings: तीन भाइ र बहिनी
भाइहरू: इमानुएल माजा, यर्मिया माजा आदि।
नेट मूल्य: पाउन्ड2मिलियन
खेल्ने स्थिति: अगाडि / स्ट्राइकर
उचाइ Feet फिट ११ इन्च वा १.5० मिटर।
फुटबलि st स्टारडम हासिल गर्ने प्रयासमा दृढ हुनुले जोश माजालाई परिभाषित गर्छ - जो उसको फुटबलिing भाइहरू मध्ये सबैभन्दा सफल छ। मनपर्‍यो पैट्रिक बामफोर्ड, ऊ त्यस्तो प्रकार हो जसले पिचमा चलाखीपूर्वक काम गर्न रुचाउँछ। प्रिमियर लिगको साथ जीवनको सुरुमा गोल गरेका यसले सबै भन्छ।
Seocndly, त्यहाँ कुनै ठूलो खुशी छ कि एक सफल परिवारको जीवनशैली सुन्दर खेल वरिपरि केन्द्रित छ। इ England्ल्यान्डले अस्वीकृत भएता पनि, माजा (अभिभावक जराबाट) नाइजेरियाली राष्ट्रिय टोलीको लागि एक मार्ग सुरक्षित गरे जहाँ उनको सफलताको आश्वासन छ।
समय निकाल्नु भएकोमा धन्यवाद जोश माजामा हाम्रो कथा पढ्नुहोस्। कृपया यदि तपाईले केहि देख्नु भयो जुन हाम्रो प्रोफाइलको जीवन कहानीमा राम्रो लाग्दैन भने कृपया हामीलाई सचेत गराउनुहोस्। अन्यथा, हामीलाई टिप्पणी सेक्सनमा थाहा दिनुहोस्, तपाईं जादू जोशुआको बारेमा के सोच्नुहुन्छ।
फुलहम फुटबल डायरी
Clint Dempsey बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
परिमार्जित मिति: मार्च,, २०१ 24